KAROORA OROMUUMMAA BALLEESSUUF PPN BAAFATE; ኦሮሞነትን ለማጥፋት ብልፅግና ፖርቲ ያወጣው STRATEGY -
KAROORA OROMUUMMAA BALLEESSUUF PPN BAAFATE; ኦሮሞነትን ለማጥፋት ብልፅግና ፖርቲ ያወጣው STRATEGY
Yaa saba Oromoo ati qulqullummaa keen jiraatta. Shirri sirratti hojjatamaa jiru garuu baayyee yaaddessaa dha. Shirri nama si fakkaatee garuu diina kee tahe, Dr. Abiy Ahmedn qindaawaa jiruu baayyee hammeenyaan kan guutee kan yeroo gabaabaa fi dheeraa ti. “Fira fakkaatee risaan simbira nyaatti” jedhama mitii?. Kana atu beekta. Mee shira qindeeffamaa jiru irraa gabaabsinee haa dubbannu.
Akka nama hin hifachiifnetti qabxii qabxiin kaa’a. Akka wal beektanii fi wal amantanitti irratti haasa’aa.
Akeeki inni duraa Oromoo dhaabaa fi hoggana dhabsiisuu dha. Qabsoon bilisummaa dhaaba malee gaggeeffamuu hin danda’u. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti finciloota hedduutu ka’anii dhaamaa turan. Erga ABO bu’ureeffamee garuu qabsoo siyaasaa, hidhannoo, diplomaasii fi hawaasummaatu otoo wal irraa hin citin gaggeeffamaa har’a gahe. ABO haalota isa qunnamaa turan hundaa keessa cichoominaa fi murannoon qabsoo gaggeessuun bu’ura injifannoolee har’a argamanii ti. Kana eenyu illee haaluu hin danda’u. Har’a PPn karoora dhaabaa fi hoggana qabsoo dhabamsiisuu baafate lafaa qaba.
Dhaaboti Oromoo hundi xaxatanii biyyatti galanii jiru. Isaan kun karaa nagaa siyaasaa gaggeessu malee qabsoo gara bira godhuu hin danda’an. Isaan filmaataan mohanna jedhanii shubbisaa jiru. Sun qumaara nyaatamee dha. Haga yeroof akka socho’an godhamaa jiruu malee booda irratti sochiin isaanii hundi sababa adda addaa itti barbaaduun ni ugguramu. Hogganoota dhaaboti Oromoo sababa adda addaa itti barbaaduun hojii ala godhu. Bara Minilik sirna Gadaa labsii dhaan dhorkuun ummata Oromoo hoggana dhabsiise. Har’as dhaabotaa fi namoota Oromoo hogganuu fi kakaasuu danda’an suuta karaa irraa maqsuu dha.
Akka mootummaa farra Oromooti hin jedhamneef Oromoota warra garaa isaanii guuttachuu kaayyoo godhatan of bira qabaa jiru. Warreen mootummaan Dr. Abiy ofitti dhiheesse warra sabaaf hin yaadne, garaa isaanii guuttachuu kaayyoo godhatanii dha. Haga ammaatti warra akkasii haga tokko ofitti fiduu irratti milka’anii jiru. Warra kana didan dantaa dhaan sossoobachuuf, yoo kanas didan sodaachisuuf karoora lafaa qabu. Abbootii Gadaa dantaan bituu hojjachuu jalqabanii jiru. Ummata Oromoo har’a sabboonumman machaawee takkaa ABO, OFC, PNO wajjin utaalu itti jarjaruun osoo hin taane rukutanii jilchuun sagantaa qophaawee hojii irra oolchuun eegalee dha. Tarkaanfii dhiha Oromiyaa, Gujii fi Boorana keessatti jalqabe bifa adda addan guutummaa Oromiyaa keessatti itti fufa. Kun osoo Oromoo hin dammaqsine taha.
Tarkaanfii sabboonummaa Oromoo dadhabsisuu fi suuta dhabamsiisuu irratti hojiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessatti hojjatamu ammumaa jalqabee jira. Waajjirri MNO amma irraa kaasee afaan Oromoo osoo hin taane afaan Amaaraan akka hojjachuu godhuun duruu jalqabe. Walgahii godhamu afaan Amaaraan gaggeessuu, qondaalota sabboonummaan itti dhaga’amu hojii irraa arihuu, ayyaan-laallattoo duwwan akak waajjira MNO dhuunfatan godhamaa jira.
Har’a barnooti Oromiyaa keessatti Afaan Oromoon kennamaa jira. Sabboonummaa Oromoo kan dagaagsan keessa tokko Afaan Oromoon barachuu waan taheef suuta suuta akka hafaa deemun godhuu irratti hojjachuun eegaleera. Jalqaba irratti afaan Amaaraa sadarkaa hundaatti akka subject tokkotti akka kennamu karrikulamii baasuun, itti aansuun Afaan Amaaraa barachuun dirqama tahu taasifna. Warrii Afaan Oromoon barate akka hojii hin arganne godhama. Kanaaf ijoolleen otoo hin jaallatin afaan Amaaraan barachuu jalqabu.
Cuunfaatti akeeki MM fi mootummaan isaa karoorfatee hojjataa jiru
Ummata Oromoo dhaaba dhabsiisuu. Dhaaboti amma jiran akka waa gochuu hin dandeenye taasisuun laamisheessu
Ummatichi akka hoggana dhabu taasisuu. Warri ijaa fi gurra ummataa ti jedhaman karaa irraa maqfamu, ni hidhamu, ni ajjeefamu,
Sabboonummaa Oromummaan laaffisuu, Afaan Oromoo kan hojii fi barnoota tahee jiru suuta kaasuu dhaan Afaan Amaaraa bakka buusuu, nafxanyoota jajjabeessuun akka Afaan Oromoon haasa’uu qaanfatan taasisuu … kkf karoora lafaa qabanii dha.
Furmaati duraa lola Oromoo irratti labsame of irraa kaasuu dha. Kana gochuuf ammoo Oromoon tokkummaa isaa jabeessee, golee Oromiyaa mara keessatti qabsoo finiinsuu dha. Shirra Oromummaa fi Oromiyaa irratti xaxamaa jiru of irraa qolachuuf qabsoo laaffatee jiru deebisnee jabeessuu malee falli gara biraa hin jiru. Dhaaboti Oromoo filannoof ummata daddammaqsuuf socho’aa jiran, yoo ummatichi jiraate filuu danda’a waan taheef filannoof dursa keennuu dhiisanii balaa Oromoo irratti aggamame qolachuuf hojjachuu qaban. Ummata nagaa qabutu waan filannoo yaada. Har’a Oromiyaan nagaa hin qabdu. Oromoon isa durii caalaa hidhamaa jira. Oromoo bakka jirruu haa sochoonu. Yeroon yeroo dawwaa’an miti. Haa jabaannu.
← ኢሰብኣዊ ድርጊት በጎንደር_አዘዞ በተጋሩና በሙስሊም ተፈፅማል! Why Ethiopia is in deep trouble, and how it got here →